NTUZIAKA BOOKMARKS - AMỤMA NCHỊKỌTA AKAỤNTỤ - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ntuziaka Bookmarks - Amụma Nchịkọta Akaụntụ
Ihe edokọbara anya na ihe nchọgharị ahụ dị irè, ọ bụghị ihe efu na ọtụtụ ihe nchọgharị nwere ngwá ọrụ ndị a maka ụdị ụdị ibe edokọbara, ma e wezụga ọtụtụ ntinye nke atọ, nkwụnye ins na ọrụ edokọbara ntanetị. Ya mere, ụbọchị nke ọzọ, Google wepụtara onwe ya onye nchịkọta edokwubara anya nke mana Bookmark Manager dịka nchịkọta Chrome.
Dị ka ọ na-emekarị na ngwaahịa Google, na ngwaahịa ndị a, enwere ike ịme ihe nchịkọta ihe nchọgharị, nke na-anọghị na ndị ogbo, ya mere m na-atụ aro ilele ihe a na-enye anyị.
Wụnye ma jiri Google Bookmark Manager
Ịnwere ike iwunye ihe edokọbara anya site na Google site na ụlọ ọrụ Chrome ebe a. Ozugbo echichi, njikwa nke ibe edokọbara na ihe nchọgharị ga-agbanwe dịtụ, ka anyị hụ. O di nwute, n'oge a ka enwere mgbakwunye nani n'asusu Bekee, ma ejiri m n'aka na Russia ga-apụta n'oge na-adịghị anya.
Nke mbụ, site na ịpị "kpakpando" maka ibe edokọbara ma ọ bụ saịtị, ị ga-ahụ windo na-emepụta nke ị nwere ike ịhazi nke thumbnail ga-egosipụta (ị nwere ike ịpịgharịa aka ekpe na aka nri) ma gbakwunye ibe edokọbara ọ bụla ị kwadoro nchekwa. I nwekwara ike pịa bọtịnụ "View all bookmarks", ebe, na mgbakwunye na nchọgharị, ị nwere ike ijikwa nchekwa na ihe ndị ọzọ. Ịnwekwara ike ịnweta akara edokọbara anya site na ịpị "Akwụkwọ edokwubara" na ogwe ibe edokọbara.
Biko mara na mgbe ị na-elele ibe edokọbara niile, enwere ihe nchekwa nchekwa onwe (naanị ọrụ ma ọ bụrụ na ịbanye na akaụntụ Google Chrome gị), nke Google, dịka ya na algọridim, yiri ụdị ibe edokọbara gị n'ime nchekwa nke ọ na-eme na-akpaghị aka (nke ọma dị ka m nwere ike ịkọ, karịsịa maka saịtị na-asụ Bekee). N'otu oge ahụ, nchekwa gị na ibe ibe edokọbara (ọ bụrụ na ị mepụtara onwe gị) anaghị apụ ebe ọ bụla, ị nwekwara ike iji ha.
N'ozuzu, n'iji nkeji na-egosi na ndọtị a nwere ọdịnihu maka ndị ọrụ Google Chrome: ọ dị mma, n'ihi na ọ bụ onye ọrụ, ọ na-ejikọta ibe edokọbara n'etiti ngwaọrụ gị niile (ọ bụrụ na i jiri akaụntụ Google gị abanye) ma dịkwa nnọọ mfe iji.
Ọ bụrụ na ị kpebie iji ndọtị a ma ịchọrọ igosi ibe edokọbara anya ị gbakwunyere ozugbo mgbe ị malitere nchọgharị, ị nwere ike ịbanye na ntọala Google Chrome ma lelee "Ihe ndị na-esonụ" ihe na ntọala mbụ, wee gbakwunye peeji ahụ chrome: //ibe edokọbara / - ọ ga-emepe ihe ngosi Bookmark Manager na ihe edokọbara niile dị na ya.